Sida loo Delete Recent on iPhone .
Weligaa mala yaabtay waxa haddii wax aad tirtiray ka iPhone la soo kabsaday karaa? Haddii aad mar uun ka yaabay, ama ma, waxaa suurto gal ah inuu ka soo kabsado waxyaabaha tirtiray ka iPhone. Xitaa ka dib markii la tirtiro aad fariimaha, abuse wac, xiriirada, jadwalka taariikhda, iwm ka iPhone, aan si buuxda u tirtiray, maxaa yeelay, dhammaan waxaa ka mid ah waxaa lagu arki karaa oo ka soo dhacsaday badan oo ka mid ah software soo kabashada ee la heli karo maanta.
Maxaa dhacaya haddii aad go'aansato in aad iibiso iPhone ama waxaa iska bixin qof laakiin aad rabto in aad si buuxda u tirtirto files oo aan ka tagin iyaga diyaar u ah in loo soo kabsaday? Waa hagaag, waxaa jira in xal loo helo in. Waxaa jira oo keliya software dhowr halkaas, in si joogto ah marna masixi karin xogta aad laakiin iyaga ka mid ah ugu fiican yahay Wondershare SafeEraser !
Wondershare SafeEraser waa software si gaar ah loogu tala galay in ay tirtirto xogta ka iPhone gebi ahaanba aan macquul mid ka mid ah helitaanka iyaga soo kabsaday. Iyadoo SafeEraser Wondershare, aad hubto in wax kasta oo aad tirtirto waa weligiis tageen. Waxba ma ahan wixii technology waxaa loo isticmaalaa, xogta tirtiray la SafeEraser Wondershare marnaba la arki karaa, wax badan oo ka yar yihiin fursadaha iyaga soo kabsaday. . Waa software ugu wanaagsan ee masixi xogta shakhsiga ah sida farriimaha, abuse wac, iwm ama aad telefoon oo dhan. Wondershare SafeEraser taageertaa dhammaan xogta ku saabsan qalab aad sida xiriirada, fariimaha, sawiro, videos, barnaamijyadooda, warsan info, sirta iyo xogta shakhsiga kale ku kaydsan aad iPhone. Waxay leedahay waxyaalo badan oo cajiib ah sida hoos ku qoran.
Simple iyo fududahay in la isticmaalo interface: masixi aad iPhone ka mid ah.
Ilaali files shaqsi: ka xaday is Jooji aqoonsigaaga.
Taageerada dhammaan macluumaadka isticmaalaha: barnaamijyadooda Support, fariimaha, sawiro, videos, xiriirada, macluumaad ku saabsan koontada, sirta ah iyo in ka badan.
Xawaaraha aad iPhone: Delete junk aan loo baahnayn in la sameeyo qalab aad si degdeg ah oo wax ku ool ah.
Xogta lagu cesho: joogto ah la tirtiro iyo in aan la soo saari karaa.
Hawadda Picture: Sii qalab aad meel dheeraad ah oo aan tempering tayada sawirada.
Tirtiro Speed ​​Fast: Ma aha in ay sugaan muddo dheer.
Sida loo isticmaalo SafeEraser Wondershare in ay tirtirto dhammaan hawlaha dhawaan ku iPhone
Talaabada 1: Isku aad iPhone iyo furi SafeEraser Wondershare ah.
Talaabada 2: Riix 1-Guji doorasho Nadiifinta uu furmo suuqa SafeEraser ugu weyn.
Talaabada 3: Sug SafeEraser si toos ah u iskaan qalab aad.
Tallaabada 4: Ka dib markii raajo la dhammeeyo, wadarta guud ee files junk lagu soo bandhigi doonaa. Guji "Nadiifinta" hoose ee suuqa kala SafeEraser ah oo bilaash ah ilaa meel qalab ee.
Hubi in aanad barkinta qalab aad inta ay socoto si aad u hesho natiijada ugu fiican.
Marka nidaamka dhamaato, waxaad arki doontaa suuqa kala soo bandhigeen warbixin ku meel la heli karo qalab aad.
Sida loo gacanta tirtirto xiriirada dhawaan ku iPhone
Talaabada 1: ka screen Home fur app Phone ah.
Talaabada 2: tuubada tab Xiriirada hoose ee app.
Tallaabo 3: U tag xiriir aad rabto in aad tirtirto oo ka jaftaa ku yaal.
Talaabada 4: Edit Tubada midig sare ee app.
Talaabada 5: Scroll si hoose ee app iyo tubbada Delete Contact.
Talaabada 6: Tubada mar kale Delete Contact ka furmo suuqa pop up si loo xaqiijiyo iyo tirtirto xiriir ah.
Tan waxaa la samayn karaa si xiriir sida ugu badan aad rabto.
Sida loo gacanta ka saar dhawaan ka farriimaha iPhone
Talaabada 1: ka screen Home fur app Quraanka.
Talaabada 2: Tubada Edit biddix ee kore iyo dooro fariimaha aad rabto in aad tirtirto. Tubada Delete yaal dhinaca midigta hoose ka dib doorashada.
Waxa kale oo aad qaban kartid oo ku simbiriirixan fariin aad rabto in aad tirtirto bidixda. Tubada Delete dhamaadka saxda ah ee fariinta in ay tirtirto fariinta. Eeg sawirka hoos ku qoran.
Sida loo gacanta tirtirto ay dhawaan ku iPhone
Talaabada 2: Tubada tab Recent hoose ee app.
Talaabada 3: Edit Tubada midig sare ee app.
Talaabada 4: Tubada badhanka cas oo ag yeedho gasho aad rabto in aad tirtirto. Si aad u cadeeyo oo dhan Guda yeedho, ka jaftaa cad cad ee bidixda xagga kore ee app.
Waxa kale oo aad tirtiri kartaa log call a ay si fudud u haysta iyo saraysa yeedho gasho aad rabto in aad tirtirto. Tubada Delete dhamaadka xaq loggii. Eeg sawirka hoos ku qoran.
Gebi Delete Recents on iPhone Video Tutorial
Si sugan loo ogolaan in aad Android Tablet ka hor inta Iibinta
> Resource > masixi > Sida loo Delete Recent on iPhone